Nye Ugbu a Gbanwee Ndụ Mmụta »Mahadum Hodges
Gbanwee ụwa maka ọgbọ
Ndị nọọsụ, ndị na-aza ajụjụ mbụ, ndị isi obodo. Otu onyinye nwere ike ịgbanwe obodo maka afọ ndị na-abịa.
Mepụta ụwa are na-anya isi! Soro anyi taa site na inye onyinye ego gi kacha amasị gi.
Mee Onyinye. Mee mgbanwe.
Worldwa anyị na-agbanwe kwa ụbọchị ka a na-agbanwe ma na-agbanwe n'ọdịniihu anyị ka ọ dabara na nke ọhụrụ Ọ bụ ejighị n'aka nke ihe echi ga-eweta na ikekwe ọ bụ ọgụ kasị sie ike.
Anyị maara na oge ndị a bụ oge nsogbu, mana site n’inyere ibe anyị aka, anyị nwere ike ịga n’ihu na-agbanwe ihe na ụwa anyị.
Onyinye gị nwere ike ime mgbanwe ahụ ma gbanwee ndụ ụmụ akwụkwọ anyị.
Eziokwu Knowmara Banyere Mahadum Hodges
Mahadum Hodges nwere obi ụtọ na anyị nwere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ.
Anyị bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na-eje ozi na gọọmentị etiti gọọmentị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 44 nke ụmụ akwụkwọ anyị na-akọwa dị ka Hispanic. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 62 nke ụmụ akwụkwọ anyị bụ ụmụ nwanyị, pasent 12 nke ụmụ akwụkwọ anyị na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ ndị agha ochie. Nkezi afọ nke ụmụ akwụkwọ anyị bụ 33 nke ọtụtụ na-arụ ọrụ oge niile mgbe ha na-azụ ezinụlọ.
Onyinye gị na-enwe mmetụta.
Wayszọ ndị ọzọ iji kwado Mahadum Hodges
Anyị na-enye ọtụtụ ụzọ ị nwere ike iji gosipụta nkwado gị maka ụmụ akwụkwọ Mahadum Hodges. Onyinye ọ bụla na-eweta ọdịiche. Ndị otu anyị ga-enwekwa obi ụtọ izute gị iji hazie onyinye gị.
Director nke Ọganihu Mahadum